Netanyahu oo sheegay inuu u sharciyey doono dhulka Yahuuda boobtay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Netanyahu oo sheegay inuu u sharciyey doono dhulka Yahuuda boobtay
September 12, 2019 - By: Abdirizak Shiino
Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ku jira ololihiisa ugu danbeeyey oo doorashada todobaadka soo socda ka dhici doona Israel ayaa sheegay in haduu guuleysto uu sharciyey doono isla markaana si rasmi ah ulla wareegi doonaan dhulka Daanta Galbeed ee Dooxada Urdun oo kamid ah dhulka reer Falastiin.
Dhulkan oo kamid ah deegaanada ay xooga ku degeen dadka Yahuuda ah isla markaana ka dhisteen magaalooyin badan ayaa ah mid Beesha Caalamka u aqoonsan tahay in si sharci daro ah lagu heysto, wuxuuna dhulkan kamid yahay deegaanka ay mustaqbalka doonayaan inuu wadankooda noqdo dowlad madax banaan oo ay reer Falastiin leeyihiin.
Deegaanada uu sheegay inuu u xalaaleyn doono Israeliyiinta ayaa ah 30% dhulka Daanta Galbeed ee wabiga Urdun.
Hogaamiyaha Israel ayaa sheegay in qorshahan uu la ogyahay Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump hirgelinteedana uu kala tashan doono xulafadooda Washington.
Netanyahu ayaa mar walba oo uu doorashada galayo sameeya balanqaadyo lagu tilmaamay mid ay ku dheehan tahay cadaawad iyo cunsurinimo ku wajahan Falastiiniyiinta si uu codod badan uga helo xagjirka Yahuuda ah.
Doorashadan asbuuca soo socda ayaa ah tii labaad ee sanadkan kadib markii uu ku guuleysan waayey Netanyahu inuu soo dhiso Xukuumada isbaheysi ah kadib doorashadii dhacday dhowr bil kahor oo uu heli waayey codod ku filan Aqlabiyada Baarlamaanka.